Man United Oo Guuldaro Waji Gabax Ah Kala Kulantay PSG, Pual Pogba Oo Dhamaadkii Kaadhka Cas Loo Taagay Iyo PSG Oo Taariikh Cusub Samaysay. - Gool24.Net
Man United Oo Guuldaro Waji Gabax Ah Kala Kulantay PSG, Pual Pogba Oo Dhamaadkii Kaadhka Cas Loo Taagay Iyo PSG Oo Taariikh Cusub Samaysay.
Manchester United ayaa guuldaro waji gabax ah garoonkeeda Old Trafford ugala kulantay kooxdii dhaawacyada badani ragaadiyeen ee PSG waxayna Red Devils la kulantay guuldaro 2-0 ah. Kylian Mbappe iyo Presnel Kimpembe ayaa min hal gool dhaliyay qaybtii labaad ee kulankan si ay PSG u siiyaan fursad ayna xataa naftoodu ku fikirin ka hor kulankan ka hor.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa la kulmay guuldaradiisii ugu horaysay ee Manchester United laakiin waxaa loo diwaan galiyay rekoodho aan xun oo aan abid taariikhda Man United uga soo dhicin iyada oo dhamaadkii kulankan kaadhka cas loo taagay Pual Pogba kaas oo seegaya kulanka lugta labaad ee Paris.
Kooxda PSG ayaa taariikh layaableh ka soo dhigtay kulankii Old Trafford ee ay Manchester United martida u ahayd waxayna PSG noqotay kooxdii ugu horaysay ee dalka France ka dhisan ee kulan tartan Yurub ah guul ku soo gaadhay Old Trafford waxayna sidoo kale noqotay kooxdii ugu horaysay ee taariikhda abid hal gool wax ka badan guul ugu soo gaadhay Old Trafford.
Kaydka: Leandro Paredes, Alphonse Areola, Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa, Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Colin Dagba.
Kaydka: Phil Jones, Alexis Sanchez, Juan Mata, Romelu Lukaku, Fred, Diogo Dalot, Sergio Romero.
Manchester United ayaa doonaysay in ay shaqo badan sii qabsato ka hor kulanka Paris ee lugta labaad ee wareega 16ka kooxood ee Champions league waxayna United sidoo kale doonaysay in ay PSG oo dhibaato dhaawacyo ah la dhibtoonaysay ay guul ka sii gaadho laakiin Thomas Tuchel ayaa qorshe fiican ku xaliyay dhibaatada dhaawacyada kooxdiisa taas oo uu Man United dhibaato ugu abuuray.
Qaybtii hore ee ciyaarta Manchester United ayaa si wayn ugu fashilantay in ay wax la sheegi karo oo dhibaato ah ku abuurto goolhayaha PSG ee Buffon kaas oo aan arag wax fursad la sheegi karo oo uu badbaadiyo waxayna PSG muujisay sida ayna u ahayn koox laba ciyaartoy ku xidhan.
Daqiiqadii 16 aad Man United ayaa fursadii ugu fiicnayd heshay kadib markii uu Pogba si sahlan ku soo dhaafay xidigii ku xidhnaa laakiin kubbad sahlan oo uu ku tuuray goolka PSG ayuu goolhaye Buffon si sahlan u qabsaday, waxayna ahayd fursadii ugu fiicnayd ee ay United heshay qaybtii hore ee ciyaarta.
PSG ayaa si buuxda lugta ugu dhigtay kubbad haynta waxayna United ku dhibtoonayeen qaabkii ay kubbad ku dhisi lahaayeen halka marka ay weerar deg deg ah abuuraan uu difaaca PSG soo burburinayay.
Daqiiqadii 28 aad PSG ayaa heshay fursadii ugu horaysay ee gool dhalin cadaan ah kadib markii ay Verratti iyo Draxler si cajiib ah iskugu xidhmeen laakiin Mbappe oo goolka United kubbada kula baxay ayaa awoodi waayay in uu goolkan dhaliyo balse muuqaalada danbe ayaa muujiyay in uu offside jiray.
Daqiiqadii 37 aad Mbappe iyo Di Maria ayaa markale kubbad kula baxay goolka United laakiin kubbada uu Di Maria dhulka ku dhigay goolhaye De Gea ee uu isku dayay in uu goolka oo madhan kubbada ku taabto ayuu arkay De Gea oo soo kacay oo kubadiisa qabtay laakiin markale offside jiray ayaan goolkan loo ogolaadeen.
Dhamaadkii qaybtii hore ee ciyaarta Jesse Lingard ayaa awoodi waayay in uu ciyaarta sii wato kadib markii uu dhaawac soo gaadhay waxaana isla ilbidhisiyadii ugu danbeeyay ciyaarta la soo galiyay Alexis Sanchez balse waxaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta, tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa hal badal shaxdiisa ku soo sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Juan Mata isaga oo reebay Anthony Martial oo ay qaybtii hore jug culusi soo gaadhay.
SIDOO KALE AKHRISO: Ryan Giggs Oo Marcus Rashford Ku Eedeeyay Cunsurinimadii & Eedayntii Pual Pogba Ay Jamaahiirta United Kula Kaceen.
Laakiin PSG ayaa la soo laabtay qaab ciyaareed layaableh waxayna dhul gariir ku abuurtay kooxda martida loo ahaa ee Manchester United iyada oo PSG markii hore awooday in ay kubbada si buuxda lugta ugu qabto ka hor intii ayna sheekooyin layaableh bilaabin.
Daqiiqadii 53 aad PSG ayaa Old Trafford neefta dib ugu celisay kadib markii Presnel Kimpembe si lama filaan ah u dhamaystiray kubbad ay ciyaartoyda Man United iska daawanayeen oo uu Di Maria koorne ka soo tuuray iyada oo De Gea oo kubbadu si toos ah u dul martay aanu wax badbaadin ah samayn waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay PSG hogaanka ciyarta ku qabtay.
Daqiiqadii 56 aad Dani Alves ayaa ugu dhawaaday in uu dhaliyo goolka labaad ee PSG kadib markii uu De Gea iska joojiyay darbo uu Di Maria uu soo tuuray waxayna markan Man United ku sigatay in goolka labaad si deg deg ah looga dhaliyo.
Daqiiqadii 60 aad Alla Maxay Waali Ahayd!! PSG ayaa si layaableh u heshay goolkeeda labaad ee ay jaho wareerka ugu abuurtay Man United iyada oo PSG soo qaaday weerar sida hilaaca oo kale ah waxaana kubbad uu Di Maria soo hor mariyay goolka United si cajiib ah goolkan ugu dhaliyay Kylian Mbappé kaas oo Eric Bailly iyo Lindelof ku ciqaabay qalad xun oo ay sameeyeen, waxayna ciyaartu noqotay 2-0 ay PSG oo Old Trafford joogtaa ay hogaanka ciyaarta ku dheeraysatay.
Haddii uu Neymar Jr dhaawac kaga maqan yahay PSG waxaa booskiisii isku taagay Di Maria halka booskii Cavani uu Kylian Mbappe yidhi waa laygu tashan karaa isla markaana waxaan awood u leeyahay in aan kaliday kooxda wadi karo.
Daqiiqadii 63 aad Kylian Mbappe ayaa kubbad layaableh oo aan la rumaysan karin kula soo baxsaday goolka Man United waxaana loo arkay in uu dhalinayo goolka saddexaad ee PSG laakiin kubbada jaqafta ahayd ee uu De Gea ka dulqaadayay ayuu goolhayaha reer Spain awooday in uu gacanta ku joojiyay!!.
Man United ayaa martay daqiiqado aan qoraal lagu qeexi karin oo jaho wareer ah laakiin Man United ayaa bilawday in ay joojiso xaalada xun ee ay kooxdeedu ku jirtay waxayna United bilawday in ay madaxa sare u qaado oo ay raadiso qaabkii ay ciyaarta ugu soo laaban lahayd.
Daqiiqadii 75 aad PSG ayaa dhibaato wayn la kulantay kadib markii uu dhaawac soo gaadhay Marco Verratti oo laba u kala gooyay khadka dhexe ee Man United wuxuuna Verratti dhaawcani ku soo gaadhay darbo uu Matic tuuray oo uu daboolay waxaana ciyaarta la soo galiyay saxiixa cusub ee L. Paredes.
Daqiiqadii 81 aad tababaraha PSG ayaa ciyaarta ka saaray Angel Di Maria oo bandhig wayn sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Dagba wuxuuna Ole Gunnar kaga jawaabay in uu Marcus Rashford oo kulankan ku fashilmay uu ka saaray wuuxuna soo galiyay Romelu Lukaku.
Daqiiqadii 89 aad Pual Pogba ayaa kaadhka cas loo taagay kadib markii uu qalad ku galay Dani Alves isaga oo haystay kaadhka digniinta ah wuxuuna u muuqday in Pogba uu kaadhkan ka badbaadayo laakiin garsooraha ayaa la xidhiidhay muuqaal caawiyaha garsoorka VAR oo markii ugu horaysay loo adeegsaday kulankan Champions League ah waxaana la go’aamiyay in Pogba uu kaadhka labaad ee digniinta ah ku qaatay casaanka ciyaarta dhmaadkeedii looga saaray.
Casaanka Pual Pogba ee daqiiqadihii ugu danbeeyay la siiyay ayaan dhibaato kulankan ah ku noqon Man United maadaama oo ay ciyaartu dhamaad ahayd balse in uu kulanka lugta labaad ee Paris maqnaan doono ayaa ah dhibta ugu wayn ee ay United wajihi doonto.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay PSG ku garaacay Man United oo Old Trafford marti loogu ahaa waxayna PSG noqotay kooxdii ugu horaysay ee Man United guuldaro ku baday Old Trafford kaas oo noqday rekoodhkii ugu xumaa ee taariikhda United kaas oo loo diwaan galiyay tababare Ole Gunnar oo sidoo kale la kulmay guuldaradii ugu horaysay ee waayihiisa United.